ဒီရာသီမှာ ချန်ပီယံဆုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုပြင်းထန်လာတဲ့ လာလီဂါ
2 Oct 2018 . 10:58 AM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ လာလီဂါပြိုင်ပွဲ စတင်တာ အခုဆိုရင် ပွဲစဉ်(၇)ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အရင်နှစ်တွေလို ပြတ်ပြတ်သားသား ဦးဆောင်နေတဲ့ အသင်းမရှိဘဲ အရင်နှစ်တွေထက်စာရင် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုပြင်းထန်နေတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဘာစီလိုနာအသင်းက ရီးယဲလ်နဲ့ (၁၄)မှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်နေပေမယ့် နောက်ဆုံး(၃)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ခံစစ်ပိုင်း အမှားတွေကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်း ဒီရာသီမှာ အမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးနေရတာလို့လည်း ပြောရမယ်။
ပွဲစဉ်(၇)အပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ပေးဂိုးက (၈)ဂိုးအထိရှိနေပြီး မနှစ်ကဆိုရင် ရာသီဝက်အပြီးအထိ (၇)ဂိုးသာ ပေးခဲ့ရတာကို ကြည့်ရင် ခံစစ်ပိုင်း အားနည်းချက်က ပိုပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ခံစစ်ပိုင်းသာမကဘဲ တိုက်စစ်ကလည်း ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်နေရတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းလည်း ဘာစီလိုနာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့ အကျိုးဆက်ကို စတင်ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး လာလီဂါ နောက်ဆုံး(၄)ပွဲမှာ (၂)ဂိုးပဲ သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
မက်ဒရစ်မြို့ခံပြိုင်ဘက် အက်သလက်တီကိုအသင်းဟာလည်း စိတ်ပျက်စရာ ရလဒ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ ဒီရာသီမှာ (၈)ဂိုးသာ သွင်းယူထားပြီး (၇)ပွဲကစား (၁၂)မှတ် ရထားတာဟာ နည်းပြဆီမြွန်နီ Simeone လက်ထက် အဆိုးရွာဆုံး မှတ်တမ်းပါပဲ။ အခုဆိုရင် ထိပ်ဆုံးက ဘာစီလိုနာနဲ့ အဆင့်(၇)နေရာက အက်စ်ပန်ညိုအသင်းတို့အကြား အမှတ်ကွာဟချက်က (၃)မှတ်သာရှိလို့ ထိပ်ပိုင်းက အသင်းတွေ အမှားလုပ်တာနဲ့ သူတို့နေရာကို ဖယ်ပေးရမယ့်အနေအထား ဖြစ်နေတယ်။
အရင်ရာသီတွေကဆိုရင် ရီးယဲလ်၊ ဘာစီလိုနာတို့ပဲ အမှတ်ပေးဇယားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဦးဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီရာသီမှာ အဲဒီအနေအထား အပြောင်းအလဲဖြစ်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ရာသီက အခုမှ အစပိုင်းပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာတာက လာလီဂါပြိုင်ပွဲအတွက် ထူးခြားမှု တစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်။ လာမယ့်ပွဲတွေမှာ ဘယ်အသင်းတွေ ခြေချော်မလဲ၊ အခုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသင်းတွေရော လက်ရှိအနေအထားကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားဆိုတာတော့ . . .
Photo:tribuna.Barca Blaugranes,Sportyou,in.reuters,DBasia.news,Boston Herald
ဒီရာသီမှာ ခနျြပီယံဆုအတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှု ပိုပွငျးထနျလာတဲ့ လာလီဂါ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ လာလီဂါပွိုငျပှဲ စတငျတာ အခုဆိုရငျ ပှဲစဉျ(၇)ပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ အရငျနှဈတှလေို ပွတျပွတျသားသား ဦးဆောငျနတေဲ့ အသငျးမရှိဘဲ အရငျနှဈတှထေကျစာရငျ ပွိုငျဆိုငျမှု ပိုပွငျးထနျနတေယျ။ အခုလောလောဆယျ ဘာစီလိုနာအသငျးက ရီးယဲလျနဲ့ (၁၄)မှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျနပေမေယျ့ နောကျဆုံး(၃)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့ပါတယျ။ ခံစဈပိုငျး အမှားတှကွေောငျ့ ဘာစီလိုနာအသငျး ဒီရာသီမှာ အမှတျတှေ ဆုံးရှုံးနရေတာလို့လညျး ပွောရမယျ။
ပှဲစဉျ(၇)အပွီး ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ပေးဂိုးက (၈)ဂိုးအထိရှိနပွေီး မနှဈကဆိုရငျ ရာသီဝကျအပွီးအထိ (၇)ဂိုးသာ ပေးခဲ့ရတာကို ကွညျ့ရငျ ခံစဈပိုငျး အားနညျးခကျြက ပိုပျေါလှငျနပေါတယျ။ ခံစဈပိုငျးသာမကဘဲ တိုကျစဈကလညျး ဂိုးရဖို့ ရုနျးကနျနရေတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးလညျး ဘာစီလိုနာနဲ့ သိပျမကှာပါဘူး။ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့တဲ့ အကြိုးဆကျကို စတငျခံစားနရေတာဖွဈပွီး လာလီဂါ နောကျဆုံး(၄)ပှဲမှာ (၂)ဂိုးပဲ သှငျးနိုငျခဲ့တယျ။
မကျဒရဈမွို့ခံပွိုငျဘကျ အကျသလကျတီကိုအသငျးဟာလညျး စိတျပကျြစရာ ရလဒျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါပွီ။ ဒီရာသီမှာ (၈)ဂိုးသာ သှငျးယူထားပွီး (၇)ပှဲကစား (၁၂)မှတျ ရထားတာဟာ နညျးပွဆီမွှနျနီ Simeone လကျထကျ အဆိုးရှာဆုံး မှတျတမျးပါပဲ။ အခုဆိုရငျ ထိပျဆုံးက ဘာစီလိုနာနဲ့ အဆငျ့(၇)နရောက အကျဈပနျညိုအသငျးတို့အကွား အမှတျကှာဟခကျြက (၃)မှတျသာရှိလို့ ထိပျပိုငျးက အသငျးတှေ အမှားလုပျတာနဲ့ သူတို့နရောကို ဖယျပေးရမယျ့အနအေထား ဖွဈနတေယျ။
အရငျရာသီတှကေဆိုရငျ ရီးယဲလျ၊ ဘာစီလိုနာတို့ပဲ အမှတျပေးဇယားကို ပွတျပွတျသားသား ဦးဆောငျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီရာသီမှာ အဲဒီအနအေထား အပွောငျးအလဲဖွဈမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ ရာသီက အခုမှ အစပိုငျးပဲ ရှိသေးပမေယျ့ ဒီလိုပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျလာတာက လာလီဂါပွိုငျပှဲအတှကျ ထူးခွားမှု တဈခုလို့ ဆိုရမယျ။ လာမယျ့ပှဲတှမှော ဘယျအသငျးတှေ ခွခြေျောမလဲ၊ အခုခွစှေမျးပွနတေဲ့ အသငျးတှရေော လကျရှိအနအေထားကို ဆကျထိနျးထားနိုငျမလားဆိုတာတော့ . . .